I-ExpressVPN Black Friday 2020 - Grab Before It Ends! - Izipesheli
I-ExpressVPN ingenye yezinsizakalo ezikhula ngokushesha ezinikeza ukuvikelwa kwe-inthanethi. Idume kakhulu kubasebenzisi abajabulela izinsizakalo zomhlaba wonke. Idatha ibizwa ngokuthi uwoyela omusha yizigidi zabantu. Ubumfihlo buba yingxenye ebalulekile yezimpilo zethu zansuku zonke. Izinsizakalo ze-VPN zinikeza isisombululo sonke esisidingayo. Kuyingxenye ebalulekile yokugcina ubunikazi buvikelekile ku-inthanethi. Akekho othanda ukulandelwa kwedatha yizinhlangano ezingaziwa. Ungazisindisa ezinsongweni eziku-inthanethi ngokusebenzisa ezinye izimali ezihlakaniphile. I- NgoLwesihlanu omnyama i-VPN amadili azokusiza ngendlela ephawulekayo. Lokhu kusebenza kahle maqondana nokugcina izindleko ziphansi. Kulo mhlahlandlela, sizokwabelana ngamadili amahle kakhulu we-Black Friday ye-ExpressVPN.
Yenza kusebenze i-49% Discount +3 Months Free
Yini uLwesihlanu Olumnyama?
Ukuthengiswa kwangoLwesihlanu okumnyama minyaka yonke kukulethela amadili amahle avela embonini yezobuchwepheshe nesoftware. Ukuthengiswa kwasebusika kwayo yonke imikhiqizo yedijithali.
I-Q3-Q4 igcwele isimanga esinjalo. Ungalindela ukubona ukukhishwa okusha okuningi futhi. Abantu abaningi bakubheka njengokuthengiswa kwemvume yobuchwepheshe. Unyaka nonyaka amarekhodi amasha asethwa izinkampani zobuchwepheshe ngokuthengisa. Amadili amnyama ngoLwesihlanu isikhathi esihle kakhulu sokuthola izaphulelo ezimnandi. Sincoma ukuthi uthenge yonke i-tech yakho ngalesi sikhathi. Kungenye yezinqumo ezihlakaniphe kakhulu ongazenza.
Kumele Uhlole: I-6 Best VPN yeNetflix
Iziphesheli ze-ExpressVPN Black Friday 2020:
Sonke sifuna ukonga imali lapho uthenga online. Ukuthengiswa okumnyama kwangoLwesihlanu kuseduze. Ungachitha okuningi kubuchwepheshe. Izinkampani ze-Tech emhlabeni wonke zinikela ngemisebenzi eyingqayizivele kumakhasimende. Isikhathi sokuqeda imali yakho yokubonga kumadivayisi amasha amnandi. Ungabavikela bonke ngokusebenzisa kwakho Kungaba nzima ukuthola isivumelwano esimnandi endaweni yamanje. Ngolunye ucwaningo, sikwazile ukuthola lokhu kunikezwa kwesaphulelo esimnandi.
1. Izinyanga eziyi-12 + 3 mahhala
Okunye kokuthengiselana okumangalisa kakhulu okutholakala kuwebhusayithi isaphulelo esingu-49%. Abasebenzisi bangajabulela isipiliyoni sokuphequlula okuphephile ngokunikezwa okuhle kakhulu. Ikulethela zonke izinzuzo ze-ExpressVPN ngentengo engabizi.Uzoba nezinyanga ezintathu zokubhaliselwe kwamahhala ngale nsizakalo. Izindleko zanyanga zonke zizoba yi- $ 6.67 yakho.
Kumahhala ukusebenzisa ikhodi yesaphulelo yawo wonke umuntu. Uma usuthengile uhlelo lwezinyanga eziyi-12, luzosebenza lube ngu-15 isiyonke. Yindlela enhle kakhulu yokonga ongayithola. Abasebenzisi emhlabeni jikelele bangakujabulela ukuvikelwa kwe-inthanethi okungenamkhawulo. Isivumelwano esimnyama sangoLwesihlanu sisebenza isikhashana. Kufanele uyisebenzise kungekudala ukuze uthole izinzuzo.
2. Isaphulelo esingu-35%
I-ExpressVPN inesaphulelo esikhethekile esingu-35% kumakhasimende abo. Izokwehlisa izindleko zakho zanyanga zonke ze-VPN ziye ku- $ 8.32 ngenyanga. Ungawuthola lo mnikelo lapho uthenga okubhaliselwe konyaka. Izindleko eziphelele zingama- $ 99.95 ngenyanga.
Ithenge namuhla ukuze ugcine izindleko zakho ziphansi futhi unike amandla ukuphepha okuvelele online. Kuyisivumelwano esihle kakhulu esimnyama sangoLwesihlanu esifuna ukuhlola isicelo. Ungazama ukuhlola izinketho zakho ukuthola amanye amanani.
3. Ukubuyiselwa kwemali yezinsuku ezingama-30
Abantu abaningi bayangabaza uma kukhulunywa ngokutshala imali isikhathi eside. Kungaba yinselele ukukhokha lonke inani ngaphambili kwabantu abaningi. I-ExpressVPN ingumhlinzeki wesevisi ophezulu kulolu hlobo. Bebeyinombolo eyodwa ebhizinisini isikhathi eside.
Abasebenzisi bangathemba ipulatifomu ngenxa yabo isivivinyo esiyingqayizivele sezinsuku ezingama-30 isiqinisekiso sokubuyiselwa imali.Iqinisekisa ukuthi ungaba nesipiliyoni sokuphequlula mahhala.Ungathola imali ebuyiswayo uma ipulatifomu ingahambelani nezidingo zakho.Siyayithokozela le nsizakalo futhi singafakazela ukusetshenziswa kwayo kwangempela.
Lezi ngezinye zezipesheli ezinhle ezitholakalayo zabasebenzisi. Ungahlola izinketho eziningi lapha bese wenza imisebenzi yenziwe. Njengoba uLwesihlanu olumnyama lusondela kakhulu izaphulelo namalungiselelo anjalo azotholakala. Hlala ubukele ukuhlola lezi zinketho. Sincoma ukuthi wandise ukufinyelela kwakho ngale nkundla.
Kukhona amathani wezici uma kukhulunywa nge-ExpressVPN. Kuyinto ehamba phambili ebhizinisini ngenxa yezinsizakalo ezinhle kakhulu ezitholakalayo. Nazi ezinye zezinzuzo esizijabulelayo ngokusebenzisa ithuluzi lokuphepha le-inthanethi.
1. Spoof indawo
Inhloso ye-VPN ukukhipha indawo ngokuyinhloko. I-ExpressVPN inamaseva emhlabeni jikelele. Abasebenzisi bangaxhuma kunoma iyiphi iseva futhi bashintshe indawo yabo yedivayisi. Kuyindlela enhle yokufinyelela okuqukethwe okuvinjiwe kusuka ku-ISP yakho. Sincoma wonke umuntu ofuna okuqukethwe okuningi ukuthi azame lokhu.
Njengekhasimende, liphelele kubasebenzisi beNetflix. Ungangena kulabhulali enkulu ngaphandle kwezindleko ezingeziwe. Emazweni amaningi, kunamawebhusayithi avinjiwe futhi. I-VPN ikunikeza indlela elula yokufinyelela kulawa masayithi. Bakhona ezindaweni eziyi-160 emhlabeni jikelele.
2. Azikho izingodo
Izingodo zikhathazeka kakhulu uma kukhulunywa ngezinsizakalo ze-VPN. Njengomsebenzisi we-inthanethi ngo-2020, sifuna ubumfihlo nokuphepha. Idatha yakho kanye ne-inthanethi izingodo zingazwela kakhulu. I-ExpressVPN iyisevisi ye-VPN engalahleki nhlobo.
Abasebenzisi bangafinyelela kunoma iyiphi iwebhusayithi ngaphandle kwezinsongo. Iphinde igcine umlando we-inthanethi uvikelekile kumhlinzeki wakho we-Intanethi. Odinga ukukwenza ukuxhuma kumaseva abo aphephile aphesheya. Yonke idatha iphephile ngokucabanga kwakho okuphephile. Ungalindela ubumfihlo obungu-100% kulokhu kuthenga.
3. Izinhlelo zokusebenza zayo yonke idivayisi
Ipulatifomu ye-ExpressVPN ingasebenza kunoma iyiphi ipulatifomu. Ifanele i-PC, i-Smartphone, neziduduzi zakho.Ungayisebenzisa kumadivayisi amahlanu ngasikhathi sinye.Isebenza kahle kakhulu ngokusetshenziswa komuntu siqu. Isoftware inezinhlelo zokusebenza ezithile zamadivayisi weselula ne-PC.
Ungayilanda ukuze uthole isivinini se-intanethi esihle kakhulu.Lezi ngezinye zezinto eziyisisekelo ezinikezwa yi-ExpressVPN. Siyethemba ukuthi lokhu kuyasiza ekuphequluleni kwakho i-inthanethi.
Ungayibhalisela kanjani i-Express VPN?
Noma ngubani angathenga izinhlelo ze-ExpressVPN. Nazi izinyathelo okufanele uzilandele. Abasebenzisi bangayithenga namuhla futhi bajabulele i-inthanethi ephephile.
Ungaqala ngokuvakashela ipulatifomu ye-ExpressVPN. Kuyindlela enhle yokuhlola izinhlelo ezahlukahlukene ezitholakalayo. Chofoza lapha thola inkinobho ye-ExpressVPN ukuqala inqubo.
Abasebenzisi bangaqala ngokukhetha uhlelo lwe-akhawunti yabo. Ungavakashela iwebhusayithi bese uthola inketho ephelele yokusebenzisa kwakho. Kunezinhlelo zenyanga, zonyaka nezinyanga eziyisithupha ezinde. Amanani azohluka, futhi ungashintsha izinketho.
Abasebenzisi kufanele bangeze imininingwane yabo epulatifomu. Ungabhalisa usebenzisa ikheli lakho le-imeyili. Faka imininingwane yakho, futhi uzokwazi ukuhamba. Ungangeza iphasiwedi ngemuva kokwenza i-akhawunti.
Inqubo yokukhokha isinyathelo sokugcina. Ungenza inkokhelo yakho ngezindlela eziningi zitholakale.
Abasebenzisi bangaphuma besebenzisa ikhadi lesikweletu, i-PayPal, i-bitcoin, nezikhwama eziningi zasendaweni. Kuyinkokhelo evela njalo, ngakho-ke imininingwane idinga ukuba lapho. Unenketho yokuyilondolozela uhlelo lwesikhathi eside noma lwesikhashana.
Kuyamangalisa! Manje ungajabulela ukuxhumeka kwe-inthanethi okuphephile kuyo yonke le minyaka.
I-ExpressVPN inikeza enye yezinsizakalo ezihamba phambili zokuphepha kwe-inthanethi. Sijabulela ipulatifomu ngezici zayo ezihlukile.Abafundi bethu bangaphequlula ngokushelelayo ngale nsizakalo. Kulo mhlahlandlela, sifaka okunikezwayo okuhle kakhulu okutholakala kungxenyekazi ye-VPN.
Ama-Anime Ahamba Phambili ayi-10 ku-Hulu (2020) - Uhlu Lokubuka Okufanele Ulubheke
bukela imibukiso ye-tv yakudala ku-inthanethi mahhala
i-roblox ukuthola i-roblox glitch yakamuva
yenza i-rap yakho ishaye mahhala
amazon prime trial free sign up
ungasakaza kanjani ama-movie kusuka ku-pc kuya ku-chromecast